दलहरुको आन्तरिक चरित्र र प्रदर्शन – Chitwan Post
दलहरुको आन्तरिक चरित्र र प्रदर्शन
नेपालका वामपन्थीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका माध्यमबाट सामन्तवादको अन्त्य गरेर पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न गरेको पहलकदमी र संयुक्त नेतृत्व र निर्वाचनका माध्यमबाट विजयी भएर सरकारको नेतृत्व गरेको विषय विश्वमै आश्चर्य र आकर्षणको विषय बनेको छ । वामपन्थीले हासिल गरेको यो लोकप्रियताअनुरुप सरकारमार्फत जनताको मन छुने गरी काम गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । तर, सरकारमा गएका मन्त्री नै कमिसनको लेनदेनमा मुछिएको विषय सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने जुन स्थिति उत्पन्न भएको छ, यसले वाम आन्दोलनको लोकप्रियतालाई धुमिल बनाएको छ ।
मुलुकले राजनीतिक परिवर्तनपछि केही न केही सकारात्मक परिवर्तनको आशा राखेकै हुन्छ । जसको आभास राजनीतिक दल र तिनले चलाएका सरकारहरुबाट स्पष्टरुपमा देखिने गरी गरिएका कामहरुले प्रस्ट पार्ने गर्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा जनताले व्यक्तिलाई भन्दा पार्टीलाई आफ्नो शक्तिको रुपमा हेर्छन् र तिनै पार्टीलाई जनमत प्रदान गर्छन् । तर, पटकपटक जनमत प्राप्त गरेका राजनीतिक दलहरुबाट जनतामा केही सकारात्मक परिवर्तनको आभाष दिलाउन सकिएन भने जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुनु स्वाभाविकै हो । मुलुकको शासनव्यवस्था दशकैपिच्छे परिवर्तन भए पनि जनताले व्यवहारमा त्यस्तो परिवर्तनको आभाष भने पाउन सकिरहेका छैनन् ।
मुलुकमा हुने राजनीतिक परिवर्तनहरुमा जनता मुलुकको दिगो समृद्धि र विकासका लागि परिवर्तनका विभिन्न खाले आन्दोलनमा सहभागी हुने गर्दछन् । राजनीतिक दलहरुलाई साथ दिएर नागरिकले आफ्ना भूमिका पूरा गर्छन् । आन्दोलनले नयाँ जोश, जाँगर र भरोसायोग्य नेता उत्पादन गर्छ र तिनीहरुबाट मुलुकको समृद्धि र विकासमा पहलकदमी होस् भन्ने चाहन्छन्, तर राजनीतिक दलहरुले र तिनका नेतृत्वकर्ताहरुले त्यसलाई आफू सिँढी उक्लने माध्यमको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
वामपन्थीले विगतदेखि राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविकाको झन्डा, नारा र कार्यक्रमलाई बुलन्दीका साथ उठाएर बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेकै परिणामस्वरुप जनताले निर्वाचनमा दुई तिहाइको जनमतका साथ निर्र्वािचत गरेर सत्तामा पु¥याएका हुन् । जनताको यो विश्वास र जनताका अपेक्षा आवश्यकताअनुसार जनमुखी तवरले सरकार सञ्चालन गर्नु वामपन्थी सरकारका लागि अहिलेको अभिभारा बनेको छ । वाम आन्दोलनले जनताको अभिमतबाट विश्वास जितेर राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्दै सरकारमार्फत आमूल सुधार र परिवर्तन गरेर समाजवाद स्थापना गर्ने कार्यनीतिलाई आत्मसात् गरेको छ ।
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा समाजवादको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न र कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउन राज्यसञ्चालनका क्रममा भइरहेका अनियमितता र भ्रष्टाचारका बारेमा निगरानी राखेर कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको विश्वास कायम राख्दै यसको अभिवृद्धि गर्न हरहमेसा ध्यान दिन जरूरी छ । यसअन्तर्गत प्रगतिशील एवं जनहितका नीति तथा कार्यक्रम सरकारमार्फत लागू गरेर, जनसेवा गरेर, पहलकदमी गरेर, जनताको विश्वास जितेर प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा विजयी हासिल गरी श्रेष्ठता हासिल गर्ने गरिन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा अब कम्युनिस्ट पार्टीका लागि यिनै कार्यनीतिकै बाटोबाट अगाडि बढ्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । तर, सरकारमा गएपछि सुख, सयल, सुविधाप्रति आशक्ति बढ्दै जान थाल्दा वा सरकारको कार्यकालमा अनियमित कार्य बढ्न थाल्यो भने सरकारप्रति जनताको विश्वास रहँदैन ।
लोकतन्त्र भनेको जनताको विश्वास हो । जनताले विश्वास गरेका आधारमा राज्यसत्तामा पुग्ने परिपाटीलाई जब कम्युनिस्ट पार्टीले अंगीकार गरेपछि नीति र व्यवहारमा वा भनाइ र गराइमा पनि एकरुपता हुन आवश्यक हुन्छ । निर्वाचनमा जनताबाट पराजित भएपछि, पराजित व्यक्तिलाई अझ बढी जनसेवा र लोकप्रिय ढङ्गले काम गर्न पार्टीले प्रेरित र निर्र्देिशत गर्नुपर्छ । तर, एउटा निर्वाचनबाट अर्को निर्वाचनमा नपुग्दै पराजित भएका व्यक्तिलाई पुनः जनप्रतिनिधिका रुपमा खडा गरी प्रतिनिधित्व गराउने परिपाटी स्थापित हुँदै गएमा यसले पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता सही ढङ्गले स्थापित हुँदैन ।
यस्ता विषयलाई पनि जनताले नजिकैबाट नियालिरहेका हुन्छन् र यसले पार्टीको लोकतान्त्रिक छविमा प्रश्न खडा गर्दछ । लोकतन्त्रमा जनताबाट चुनिएका सक्षम व्यक्तिले राज्यसञ्चालन गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ । तसर्थ, पार्टीले जनसमक्ष खडा गर्ने उमेदवार पनि सक्षम र योग्य नै खडा गर्नुपर्छ । यसका लागि पार्र्टीिभत्र नै कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट भएका व्यक्तिको नेतृत्वको छनोट गर्ने विधि र पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । राज्यसञ्चालनमा नियुक्त गरिने व्यक्ति पनि संस्थागत तवरले सक्षम र योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, अनिमात्र लोकतन्त्रमा सक्षम र योग्य व्यक्तिले शासन सञ्चालन गर्ने आधार तयार हुन्छ र लोकतन्त्र फस्टाएर जान्छ ।
नेताहरुमा उग्र राष्ट्रवादका चर्का नारा र एकले अर्कालाई सिध्याउने पाराबाहेक कुनै दर्बिलो परिवर्तनको चित्र देखिँदैन । व्यवस्था परिवर्तनसँगै नीतिमा परिवर्तन हुनुपर्ने हो । नीतिसँगै कार्यशैलीमा परिवर्तन हुनुपर्ने हो । नेतृत्वको आचरणमा परिवर्तन हुनुपर्ने हो । राजनीतिक दल र तिनका अन्य सहयोगी अङ्गहरुको कार्यशैली र संस्कारमा परिवर्तन हुनुपर्ने हो । विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउनुपर्ने हो । भ्रष्टाचारविरूद्धको शून्य सहनशीलताका विषयहरुमा परिणाम देखिने गरी जनतामाझ आउनुपर्ने हो । जनताले चाहेको व्यवस्थामा, जनताले ल्याएको व्यवस्थामा जनता नै त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुँदै जानुले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता अझै पनि प्राप्त हुन नसकेको झल्को देखिन्छ । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी, जिम्मेवार, जवाफदेही भई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको संवाहक हुन सकेको छैन । प्रक्रियामुखी, ढिलासुस्ती, अनियमितताजस्ता परम्परागत आरोपबाट मुक्त हुन सकेको पाइँदैन ।
कम्युनिस्ट पार्टीको जनवादी केन्द्रीयता अलोकतान्त्रिक होइन । तलबाट बहुमतका आधारमा जनमत लिएर निर्णय गर्ने र केन्द्रले निर्णय कार्यान्वयन गर्दा असहमति राख्न नपाइने प्रणाली कम्युनिस्ट पार्टीमा छ । पार्टी अध्यक्ष आफैँले आफूखुसी निर्णय गर्न पाउँदैन । निर्णय गर्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट गर, सकेसम्म सहमतिमा निर्णय गर, नसके बहुमतको आधारमा निर्णय गर । जब निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ त्यसपछि विरोध गर्न पाइँदैन । यही नै जनवादी केन्द्रीयता हो । तर, यसको ठीक उल्टो केन्द्रीय कमिटीलाई पोलिटब्युरोले, पोलिटब्युरोलाई सचिवालयले र सचिवालयलाई स्थायी कमिटी हुँदै अध्यक्षको नजानिँदो निर्देशन हुन्छ । यी सबै हुँदाहुँदै पनि पार्टीको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले आफूअनुकूलको निर्णय गराउन खोज्छ । पार्टी अध्यक्ष छ भने फेरि अध्यक्ष हुने उसको रहर हुन सक्छ । आवधिकरुपमा गरिने चुनावसँग पार्टी नेतृत्वलाई जोड्ने हो भने यो समस्या केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ । पार्टी हार्ने भनेको नेतृत्व हार्ने हो । उसले जनतालाई विश्वास दिलाउन नसकेको हो ।
तर, कहाँ छ यहाँ लोकतन्त्र ? यही नै समस्या हो । जहाँसुकै प्रभावशाली व्यक्तिको हैकम चल्ने गर्छ जसले लोकतन्त्र, विधि र विधानलाई कमजोर बनाउँछ । मिडियामा कोही प्रभावशाली भएर आयो भने पार्टीमा पनि स्वाभाविक बलशाली हुन्छ र जतासुकै प्रभाव जम्छ । नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्वको अनन्त सम्भावना भएका होलान् तर शेरबहादुर, रामचन्द्रलगायतले छायामा पारेका छन् । त्यस्तै सम्भावना नेकपामा छन्, त्यहाँ पनि प्रचण्ड, ओली, माधव कुमारलगायतले रोकिराखेका छन् । एउटा अवधिपछि पनि उनीहरुले छोड्नुपर्दैन । लोकतन्त्र मजबुत बनाउनलाई तलैबाट नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ । अभ्यास र प्रक्रियाले नेतृत्व विकास गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ । नेतृत्वले आफूभन्दा तलको नेतृत्वलाई वैचारिक, सैद्धान्तिक र सांगठनिकरुपमा खारिएर आओस् भन्ने वातावरण तयार पार्ने काम हो, तर हामीकहाँ छेकिन्छ ।
सरकारको अहिलेको प्राथमिकता के हो ? संघीयताप्रति पार्टी र सरकारको धारणा के हो ? खोइ, बहस भएको ? पार्र्टीिभत्र र संसदीय दलमै पनि बहस भएको देखिँदैन । बहस गर्ने र विचार निर्माण हुने ठाउँमा यसको च्यानल नै देखिँदैन । पार्टी, संसदीय दल र विचार निर्माताहरुबीच छलफल गराउने काम पार्टीले गराउने हो । आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएका अहिलेका पार्टी वैचारिक, सांगठनिक, आर्थिक व्यवस्थापन र परिचालनका दृष्टिले अन्यन्तै कमजोर छन् । लोकतन्त्र बलियो बनाउन दलहरु बलियो बन्नुपर्छ । दलहरु बलियो बन्न दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बन्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेका मौलिक हकहरु कार्यान्वयन गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न नसकिएको अवस्था छ । संविधानले सबै प्रकारका विभेद एवम् जातीय छुवाछूत अन्त्य गरे पनि व्यवहारमा अन्त्य हुन सकेको छैन । कानुनी राज्यको अवधारणा लागू गरी दण्डहीनताको अन्त्य भएको प्रत्याभूति दिन सकिएको छैन । अनियमितता एवम् भ्रष्टाचारजन्य कार्य निवारण गर्न सकिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उद्देश्यमूलक हुन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक आन्दोलन, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण एवम् सूचना प्रवाहमा सञ्चार जगत्को सकारात्मक भूमिका देखिए पनि आवश्यक नियमनको अभावले निष्पक्ष र व्यावसायिक हुन नसकेको अवस्था छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र छ, तर पनि न्यायनिरुपण एवम् फैसला कार्यान्वयनलाई छिटोछरितो बनाउन नसकिएको, राज्यप्रणालीमा लागू गरिएको समावेशिताले लक्षित वर्गलाई समेट्न सकेको छैन ।
राजनीतिक दलहरुले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता इमानदार भएर लागू गर्ने र दलको आम्दानी तथा खर्चमा पारदर्शिता ल्याउने, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने, दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सबैले स्वच्छ आचरण एवम् अनुशासित व्यवहार देखाउनुपर्ने छ । राजनीतिले प्रशासनलाई कुशल नेतृत्व प्रदान गर्ने, प्रशासनले राजनीतिक तटस्थता देखाउने र निर्र्वािचत सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने चुनौती रहेका छन् ।
छोटो कार्यप्रक्रिया, सरल फाराम एवम् छिटो निर्णय गरी सेवा प्रवाह गर्ने, घुम्ती सेवा, एकद्वार सेवा प्रदान गर्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई सकेसम्म कम गर्ने, निर्वाचन आयोगले सबै दलहरुसँग समन्वय गरी खर्च कम गर्ने उपायहरु लागू गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका कमजोरी हटाई वास्तविक वर्गको उपस्थिति बढाउने, सञ्चार जगत्को भूमिकालाई थप मर्र्यािदत बनाउन आवश्यक नियमनको व्यवस्था गर्ने साथै व्यावसायिक सञ्चारको विकास गर्ने, पत्रकार हुन आवश्यक पर्ने योग्यता तोक्ने र तोकिएको निकायबाट न्यूनतम परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रलाई अत्यन्त कमजोर बनाउने भएकाले भ्रष्टाचार निवारण गर्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च तहबाट अभियान सञ्चालन गर्ने, कानुनी, संस्थागत एवम् प्रक्रियागतलगायतका व्यवस्थामा आमूल सुधार गर्ने, प्रविधिले भ्रष्टाचार रोक्दछ त्यसैले राज्यप्रणालीका हरेक क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने र यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औजारका रुपमा विकास गर्ने हो ।
नेपालको संविधानले नागरिकका मौलिक हकअधिकारलाई व्यापकरुपमा फराकिलो बनाएअनुसार त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने, न्यायसम्पादनमा न्यायपालिकालाई सबल बनाउने, न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, सुविधामा वस्तुगत आधारमा मापदण्ड लागू गर्ने, छिटोछरितो निर्णय र सोको शीघ्र कार्यान्वयनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी कार्य गर्ने, मुलुकमा लागू गरिएको समावेशितालाई उद्देश्यमूलक बनाउने, आरक्षण, सकारात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतबाट प्राप्त हुने सहभागितामा लक्षित वर्ग तथा समुदायको अपनत्व बढाउने गरी काम गरिनुपर्छ । समावेशिताका सबै प्रयासहरुमा मापदण्ड तय गरी कोही पनि नदोहोरिने र आवश्यक कोही पनि नछुट्ने नीति लागू गर्ने गर्नुपर्छ । नागरिक शिक्षालाई विद्यालयका पाठ्यक्रममा समावेश गरी नागरिकका हकअधिकारमात्रै होइन कर्तव्य तथा देशप्रतिको दायित्वलगायतका विषयमा शिक्षादीक्षा दिँदै आचरणयुक्त असल नागरिक निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
निश्चल मगरलाई सहयोग